HomeỤWAAsia81 JapanTōkaidō Shinkansen Railway
23 / 05 / 2020 81 Japan, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General
Site na mmecha nke uzo di elu di n'etiti Tokyo na Osaka, oge njem bidoro malitere oge ohuru na njem ụgbọ oloko.
Emepebere oge asọmpi oge okpomọkụ na 1964 na Tokyo, Shinkansen (nke pụtara “eriri ọhụrụ” na Japanese) nwere ike iru 200km / h. Traingbọ okporo mgbọ mgbagha ghọrọ ihe nnọchianya nke ike ọrụ mgbe a na-ewughachi agha Japan, ma gosipụta na ụzọ ụgbọ elu nwere ike bụrụ ihe ịga nke ọma azụmahịa, na-eburu ndị njem nde 100 na afọ atọ mbụ. Akụkụ ndị na-enweghị ụzọ ntụgharị na mkpọda dị nkọ, nke ewepụtara maka Tōkaidō Shinkansen, bụụrụ ndị atụ maka ọrụ okporo ụzọ dị elu n'ụwa niile n'ọdịnihu.
Ụgbọ okporo ígwè dị elu n'ụwa - TGV Shinkansen na ndị ọzọ
Ụgbọ oloko kachasị ọsọ n'ụwa: TGV na Shinkansen
Japan High Speed ​​Line Japan
Japanese Na-agba ọsọ ngwa ngwa 500
Kedu ka Japan si mepụta ụgbọ oloko dị elu SHINKENSEN?
Ọkụ ụgbọ elu dị elu Shinkansen ụgbọelu
Ụgbọ njem ngwa ngwa Japan bụ Shinkansens na ahịa ndị Europe
Kangbọ okporo ígwè dị elu Shinkansen na Japan
Ọnye na-bụ Fuat Zincirkıran?